YawNathan Zinyaw: ပြည်သူ့ ကဗျာဆရာကြီး ပက်ဗလို နီရူဒါ
Posted by ယောနသံစင်ရော် at 7:01 PM
အခုမှဘဲ သေသေချာချာ ရေရေရာရာ နားလည်း
သွားတော့တယ် တကယ်ပါ ကျေးဇူးဘဲ အမရေ။
ဒီတခါ တကယ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက အပေါ်က စားသားကို ဖတ်ဖူးတယ်။ ရေးသားသူနာမည် မပါလို့ သူတို့ ရေးတယ်လို့ထင်ထားတာ။ အခုတော့
ညီမလေး အကိုတောင် သူ့ အကြောင်း တင်ပေးမလားလို့ စဉ်းစားနေတာ ခုတော့ ညီမလေး တင်ပေးလိုက်တော့ အဆင်ပြေသွားပါရဲ့....
တခြား သူ့ကဗျာတွေ အများကြီး ရှိသေး....
အကိုလည်း ပြန်ပေးချင်ပါတယ်.. အချိန်ယူရမှာရော ဘာသာစကားကို ၂ ဖက်လုံး ညီမျှအောင် လုပ်ရမှာရောဆိုတော့ သိပ်တော့ မလွယ်ကူဘူးလေ...
ဘာသာပြန်ပေးချင်ရင် နောက်ထပ် ကဗျာတွေ အကို့ဆီမှာ ရှိတယ်...
Good post MM. I love that poem at the beginning. Now I know more about 1971. :-)
ကိုအောင်၊ ကိုဟန်လင်းထွန်း၊ အကိုဆောင်းယွန်း ကျေးဇူးပါပဲ။
ကိုကြီးအောင်သာငယ်.. ကဗျာကိုတော့ ဘာသာပြန်နိုင်မယ် မထင်ဘူး.. အကိုပြန်ပေးရင်တော့ ပိုကောင်းမှာပေါ့။
ဘလောဂ်ရေးထက် ၀မ်းရေးအတွက် ဖြေရှင်းနေရတယ်ဆိုတော့ လာဖတ်တာ နောက်ကျသွား၏။
နီရှုဒါအကြောင်း အခုမှပဲ စုံစုံလင်လင် သိသွားတာပဲ။
နီရှုဒါလဲ ခေသူမဟုတ်ဘူးနော်။ မြန်မာ ဘလောဂ်ဂါများကို ဦးနှောက်စားအောင် လုပ်နိုင်တာပဲ ဟ ဟ၊
နီရူဒါ အကြောင်း သိချင်နေတာ ကြာပြီ အစ်မရေ။ အခုလို တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မြန်မာလို ဖတ်ရလိမ့်မယ် လို့ မမျှော်လင့်ထားတာတော့ အမှန်ပဲ။
သေချာတော့ မဖတ်ရသေးဘူးဗျာ။ ပြီးမှ နောက်တစ်ခေါက် သေသေချာချာ လာဖတ်ပါဦးမယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ :)